के स्टार सेलेब्रेटीले पारश्रमिक घटाउलान् ? -FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
के स्टार सेलेब्रेटीले पारश्रमिक घटाउलान् ?
फिल्मी फण्डा । कोभिड–१९ का कारण सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावमा छ । विशेषतः फिल्म क्षेत्र शुन्य अवस्थामा छ । हजारौं प्राविधिक र सयौं जुनियर कलाकारको दैनिकी कठिन हुदै गएको छ । लकडाउन पूर्ण रुपमा कहिले हट्ने हो कुनै निर्क्यौल छैन ।
लकडाउन खुलेपनि फिल्म क्षेत्र सक्रिय भईहाल्ने अवस्था पनि छैन । किनकी फिल्म क्षेत्र सबैभन्दा पछाडी खुल्ने क्षेत्र हो । कमजोर फिल्म क्षेत्रलाई कोभिड–१९ ले फेरि एक पटक थचक्क बसाएको छ । अब फिल्म क्षेत्र कसरी उठ्न सक्ला ? फिल्म क्षेत्रले गति कहिले पाउने ?
अहिलेको चर्चाको विषय बनेको छ यो प्रश्न । फिल्मसँग सरोकारवाला संघ संस्था र फिल्मकर्मीले फिल्म डेभलपमेन्ट बोर्डले विशेष प्याकेज र निर्देशिका ल्याएर फिल्म क्षेत्र शुचारु गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । कतिले भने लकडाउनपछि नेपाली फिल्मले विषयवस्तुमा पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
अबको बजार पहिलेको तुलनामा ४० प्रतिशतमा खुम्चने आँकलन छ । यस्तो अवस्था गुणस्तर कायम गर्दै निर्माण लागत समेत खुम्चाउनु पर्ने अवस्था छ । स्टार भनिएका प्राविधिक, कलाकार र निर्देशकको पारश्रमिक सानो बजेटको फिल्मको कूल लागतकै जति पुग्ने गरेको छ ।
यसरी प्राविधिकदेखि कलाकार र निर्देशकसम्मलाई महँगो पारश्रमिक दिएर फिल्म निर्माण गर्दा बजार खुम्चेका कारण निर्माता सुरक्षित नहुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो पारश्रमिकमा केही छुट दिनुपर्ने फिल्म निर्माताहरुले धारणा राखिरहेका छन् ।
तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्टार प्राविधिक, कलाकार र निर्देशकले आफ्नो पारश्रमिकमा यति प्रतिशत छुट दिने भन्ने कुनै धारणा बाहिर ल्याएको देखिदैन । हलिउड र बलिउडमा स्टार कलाकारहरुले १० देखि ३५ प्रतिशतसम्म पारश्रमिक छुट गरेका छन् ।
हरेक कुरा विदेशबाट फलो गर्ने स्टार प्राविधिक, कलाकार र निर्देशकले आवश्यक रहेको यो विषयमा भन्ने ध्यान पुराएको देखिदैन । यदि स्टारहरुले आफ्नो पारश्रमिकमा छुट दिने हो र अन्य पक्षहरुले पनि सम्झौता सहकार्यमा आएर काम गर्ने हो भने फिल्म क्षेत्र पहिलेकै अवस्थामा उठ्न हम्मे पर्ने छैन ।
यतिखेर सबैले यो विषयमा केन्द्रित भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । अनावश्यक परिवारवाद, नातावाद र ग्रुपिजम भन्दा यतातिर स्टार भनिएका प्राविधिक, कलाकार र निर्देशकले ध्यान दिन सके फिल्म क्षेत्रले निकास पाउँथ्यो । अरु विषयमा त पछि पनि आवश्यक रुपमा बहस गर्न सकिन्छ । तर यो समय माहामारी संकट कसरी पार गर्ने भन्ने हो ।